Dowlada Maraykanka oo soo dhoweysay xiriirka Somaliland iyo Taiwan - Jowhar Somali Leader
Home News Dowlada Maraykanka oo soo dhoweysay xiriirka Somaliland iyo Taiwan
Dowlada Maraykanka oo soo dhoweysay xiriirka Somaliland iyo Taiwan
Dowlada Maraykanka ayaa soo dhoweysay xiriirka dhex maray maamulka Somaliland iyo Maamulka Taiwan. Xafiiska Aqalka Cad u qaabilsan arrimaha Amniga Qaranka ayaa ammaanay galaangalka diblumaasiyadeed ee Tiawan ay ka bilowday Bariga Afrika gaar ahaan “Somaliland.”
“Waa guul laga gaaray xiriir diblumaasiyadeed ee naadirka ah ka dib markii ay Taiwan xiriir la yeelatay gobolka madaxa bannaan ee Somaliland”, ayaa lagu qoray wakaaladda wararka ee Mareykanka ee Associated Press.
“Waa muhiim in la arko Taiwan oo sare u qaadeysa shaqadeeda xiriir ee Bariga Afrika, xilliga oo ay baahi badan jirto,” ayaa lagu qoray Twitter-ka Laanta Amniga Qaran ee Mareykanka.
Farriintaan waxay daba socotay heshiiska dhowaan ay wada saxiixdeen Taiwan oo Shiinaha uu u aqoonsan yahay gobol dalkiisa ka tirsan iyo Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
Waxayna farriinta dowladda Mareykanka imaaneysaa ka dib markii Shiinaha uu sheegay inuu diidan yahay xiriirka diblumaasiyadeed ee Taiwan iyo Somaliland.
Shiinaha wuxuu doonayaa in Taiwan ay militari ahaan hoos timaado maamulkiisa. Balse afti laga qaaday shacabka Taiwan waxay si aqlabiyad ah u diideen in siyaasad ahaan ay ula midoobaan Shiinaha.
Sidoo kale, dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ka soo hor jeesatay xiriirkaas labada dhinac dhexmaray.
Odawaa “Waxaan rajeyneynaa in Madaxweyne Farmaajo garowsan yahay xaalada adag ee dalku…”
Beesha Caalamka oo ugu baaqday madaxda Soomaaliya in la qabto shirka muhiimka ah ee Doorashooyinka